upon - Synonyms of upon | Antonyms of upon | Definition of upon | Example of upon | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for upon
Top 30 analogous words or synonyms for upon
Wish Upon Wish Upon ဇာတ်ကားသည် အမေရိကန် သဘာဝလွန် ကြောက်လန့်ဖွယ် ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်ပြီး John R. Leonetti မှရိုက်ကူးပြီး Barbara Marshall မှ ဇာတ်လမ်းရေးသားကာ သရုတ်ဆောင်များအဖြစ် Joey King, Ryan Phillipe, Elisabeth Rohm, Ki Hong Lee, Shannon Purser, Sydney Park နှင့် Sherilyn Fenn တို့မှ ပါဝင်ကြပါသည်။
Wish Upon ဤရုပ်ရှင်မှာ ၂၀၁၅ တွင် ရိုက်ကူးခွင့် ပိတ်ပင်ခံခဲ့သည်။ ဂျူလိုင် ၂၇၊ ၂၀၁၆ တွင် John R. Leonetti မှ ဒါရိုက်တာအဖြစ် ပြန်လည်ရိုက်ကူမည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်ကို Sherryl Clark မှ သူမ၏ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးဖြစ်သော Busted Shark Productions မှထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီး and Barbara Marshall မှ ဇာတ်လမ်းရေးသားခဲ့သည်။ ဩဂုတ် ၂၀၁၆ တွင် Joey King မှ အဓိကဇာတ်ဆောင်အဖြစ်ပါဝင်လာခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်ကို နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ တွင် Toronto တွင် စတင်ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ နိုင်ဝင်ဘာလ ၉၊ ၂၀၁၆ တွင် Ki Hong Lee မှ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်
Wish Upon ဇူလိုင် ၁၄၊ ၂၀၁၇ တွင် စတင်ပြသမည်ဖြစ်ပြီး Broad Green Pictures and Orion Pictures တို့မှ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီသည်။
Wish Upon ရုပ်ရှင်ကို ဇူလိုင် ၁၄၊ ၂၀၁၇ တွင် ရုံတင်ပြသမည်ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင် အမြည်းနမူနာကို ဖေဖော်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၇ တွင် ထုတ်လွင့်ခဲ့သည်။ ပထမ အမြည်းဇာတ်လမ်းတိုကို မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၁၇ တွင် ဖြန့်ချီခဲ့သည်။ ထို့နေက် ဒုတိယ အမြည်းဇာတ်လမ်းတိုကို မေလ ၂၂ ရက် ၂၀၁၇ တွင် ဖြန့်ချီခဲ့သည်။
Wish Upon Clare Shannon (Joey King) သည် သူမ၏ဖခင်ထံမှ ပဟေဠိဆန်ပြီး ထူးဆန်းသော တီးလုံးသေတ္တာလေးရရှိပြီး သူမ၏ ဆုတောင်းများ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည့်အတွက် အံ့အားသင့်နေရသည်။ သူမ၏ အရုပ်ကလေးသည် တဖြေးဖြေး ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလာကာ ဆုတောင်းအသစ်တစ်ခုခြင်းစီသည် အသက်သွေးများနှင့် ရင်းနှီးရတော့မယ်ဆိုတာ သူမ သိလိုက်ရလေသည်။
ရှိန်းကျိန့်မြို့ For example, the tall Pingan International Finance Centre will be the tallest in China and second tallest building in the world upon completion in 2014, after the Burj Khalifa. See list of tallest buildings in Shenzhen.
UTC+14:00 The revision of Kiribati's time zone meant that the date line in effect moved eastwards to go around this country, so that the Line Islands, including the inhabited Kiritimati island, started the year 2000 on its territory before any other country on earth,afeature which the Kiribati government capitalized upon asapotential tourist draw.